Taageero – Vapaaehtoinen Paluu
Qofkee loogu talaggalay
Taageerada dib ugu noqoshada dalkii hooyo
Taageerada si wadajir ah ayaa loo go’aaminayaa
Marka si ikhtiyaari ah dib loogu noqonaayo dalkii hooyo, waxaa la siin karaa caawimaad kaash ama caddaan ah oo ku xiran hadba dalka loo noqonaayo, taasoo u dhexeysa 200-1500 oo yuuro, caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketukea) waxaa ay u dhexeysaa 3000 – 5000 €. Adiga ayaa go’aan ka gaaraaya, ma waxaad doonayssaa caawimaadda kaashka ah ama tan kale ee ah waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketukena.)
Caawimaadda kaashka ah
Haddii aad doorato caawimaadda kaashka ah waxaa adiga nafsad ahaantaada heleysaa 200 – 1500 € iyo 100 – 750 € loogu talaggalay ilmaha yar ee aan qaangaarka ahayn ee dib kuula noqonaaya.
Waxaad sidoo kale codsan kartaa lacagta caawimaadda kaashka ah ee la kordhiyay, tusaale ahaan xaaladdaada caafimaad awgeed. Lacag kordhinta waxaa loo falanqaynayaa mar walba si gaar ahaaneed, iyadoo tixagelinta la siinaayo xaaladda guud.
Caawimaadda waxtarka kale ee aa lacagta ahayn (hyödyketuki)
Ereyga ah (hyödyketuki) oo loola jeedo caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn, waa erey rasmi ah oo loo yaqaan caawimaaddan, taasoo aan ahayn lacag kaash ah. Caawimaadda noocaan oo kale ah waxaa ay noqon kartaa tusaale ahaan, caawimaadda loogu talaggalay asaasidda shirkad ganacsi, guri raadin, waxbarasho ama adeegyada caafimaadka.
Caawimaadda kaashka ah beddelkeeda, waxaa in badan oo dadka ka mid ah ay doortaan nooca kale ee ah caawimaadda waxtarka aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Waxaana dhici karta marka xaaladdaada loo eego, in ay tahay mid aad kuugu wanaagsan oo qiimo kuu leh. Haddii aad doorbideyso in aad qaadato caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waa inaad ka fikirtaa waxyaabaha adiga kaaga suurtaggalka ah inaad ka qabsato dalkaaga hooyo. Tusaale ahaan ka feker arrimaha ay ka mid yihiin:
Xaalad sidee ah ayaad ku noqoneysaa?
Maxaad samayn jirtey markii hore ee aad dalkaaga joogtay?
Maxaad u baahan tahay markii aad dalkaaga ku noqoto kaddib?
Qaabkee ugu wanaagsan oo aad uga faa’iidaysan kartaa caawimaadda lagu siiyay?
Waxaa lagu siin doonaa talooyin ku saabsan sida aad caawimaddaas u isticmaali lahayd, iyo hawlaha la xiriira qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaa qabanqaabintiisa loo mari doonaa adeeg bixiyayaal lagu kalsoon yahay oo jooga dalka aad dib ugu noqonayso, kuwaasoo aad wadashaqayn yeelan doontaan.
Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki), waxaa qabanqaabintiisa loo mari doona oo kaliya, hay’ad la hubiyay oo lagu kalsoon yahay oo dalkaagii hooyo ka jirta. Hawlwadeennada dowladda ee dalkaagana sooma fara gashanayaan qabanqaabinta caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki).
Talooyin ku saabsan isticmaalista caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki)
Caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waa mid aan xadidnayn, qof walbana si gooni ah ayaa go’aan looga gaarayaa. Waxaad daawataa fiidiyoowgaan soo socda oo ka hadlaaya khibradda ay ka heleen Hassan, Fadumo iyo Farah, dib ugu noqoshada dalkoodii hooyo.
Adeeg bixiyaha caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki) waa kuwo kala duwan, taasoo ku xiran hadba dalka lagu noqonaayo. Waaxda socdaalka waxaa ay isticmaashaa adeeg bixiyayaasha ururada howshaan loo tartansiiyay ee hoos yimaada hay’adaha kala IOM ama European Return and Reintegration Network. Dalka Ciraaq waxaa adeeg bixiye ka ah ururka European Technology and Training Center (ETTC). Haddii aad doonayso inaad hesho talooyin dheeraad ah oo ku saabsan, halkee ayaa loo isticmaali karaa caawimaadda waxtarka kale ee aan lacagta ahayn (hyödyketuki). Waxaad daawan kartaa sheekooyinka dheeraadka ah oo ku saabsan dad dib ugu noqday dalkoodii hooyo, oo aad ka heli karto bogagga ETTC:n sivuilta ama ERRIN:in sivuilta.
Sidaan soosocota ayaad caawimaadda ku heleysaa
Caawimaadda inta ay le’eg tahay waxaa ay ku xiran tahay qaabka caawimaadda iyo cadadka ugu sarreeya ee sharciga dalkaan Finland lagu qeexay ee aan la dhaafi karin, ee waddanka uu qofku ku noqonaayo.
Caawimaadda waxaa diyaarinaysa dowladda Finland, si gaar ah waxaa u diyaarinaaya Waaxda socdaalka iyo hay’adda IOM oo wada jira. Hay’adda IOM waa urur ka tirsan Qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha dadka muhaajiriinta ah. Dalalka kale kama qayb qaadanayaan go’aan ka gaarista arrinkaa iyo qabanqaabintiisa toonna.
Haddii aad caawimaadda xaq u ledahay waad heleysaa. Siinta caawimaadda waxaa lagu go’aamiyaa Finland gudaheeda, iyadoo lagu salaynaayo sharciyada dalkaan Finland. Waddamada kale ee aan Finland ahayn marka dib looga noqonaayo, dal walbaa wuxuu leeyahay sharciyadisa u gaarka ah.
Sheeg xaaladdaada annaga ayaa ku caawinayna. Mana jiraan wax waajibaad ah oo ka dhalanaaya la soo xiriirista.
Waxaad soo diri kartaa farriin dhanka Whatsapp-ka ah ama waad na soo wici kartaa: